တကျော့ပြန် ကိုဗစ်ကူးစက်မှုတွေကြောင့် ဥရောပနိုင်ငံတချို့ ကန့်သတ်ချက်တွေထုတ်ပြန်
FILE - The patient Kurt Switil, left, receivesaPfizer vaccination against the COVID-19 disease byadoctor in the vaccination center ‚Am Schoepfwerk' in Vienna, Austria, April 10, 2021. The Austrian government orderedanationwide lockdown for unvaccina
သြစတြီးယားနိုင်ငံမှာ ကိုဗစ်ကူးဆက်မှုနှုန်းပြန်လည်မြင့်တက်လာနေတဲ့အတွက် တနင်္လာနေ့ ကစတင်ပြီး တနိုင်ငံလုံးကို Lockdown သွားလာမှု့ကန့်သတ်တဲ့အမိန့်ကိုပြန်လည်ချမှတ်မှာဖြစ် ကြောင်း သောကြာနေ့က ၀န်ကြီးချုပ် Alexander Schallenberg ကပြောကြားလိုက် ပါတယ်။
သွားလာမှချုပ်ချယ်ကန့်သတ်တဲ့အမိန့်ကို ၁၀ ရက်ကနေ ရက်၂၀ လောက်အထိပြဌာန်းနိုင်ပြီး ဒီအမိန့်ဟာ ဒီဇင်ဘာလ ၁၃ ရက်နေ့အထိအကြုံးဝင်ပါတယ်။
ဒါ့အပြင် ဖေဖေါ်ဝါရီလ ၁ ရက်နေ့နောက်ဆုံးထားပြီး တနိုင်ငံလုံးကာကွယ်ဆေးမထိုးမနေရ အမိန့်ကိုလည်းကြေညာခဲ့ပါတယ်။ သြစတြီးယားနိုင်ငံမှာ တိုင်းပြည်လူဦးရေရဲ့ ၆၄ . ၁ ရာခိုင်နှုန်း ကာကွယ်ဆေးထိုးပြီးသားဖြစ်ပါတယ်။ သြစတြီးယားဟာ ပထမဆုံး lockdown ပြန်ချတဲ့ ဥရောပနိုင်ငံဖြစ်ပါတယ်။
တချိန်တည်းမှာဘဲ ဂျာမဏီနိုင်ငံမှာလည်း ကိုဗစ်ကူးစက်မှုတွေဟာ ပြန်လည်ဆိုးရွားလာပြီး အမျိုးသားအရေးအပေါ် အခြေအနေဆင့်ကိုရောက်ရှိနေတဲ့အတွက် ပြန်လည်လျော့ကျသွား အောင်အရေးပေါ်ဆောင်ရွက်မှုတွေလုပ်ဖို့ ဂျာမန်ကျန်းမာရေးဌာနအကြီးအကဲတွေက သောကြာနေ့မှာ ပြောကြားလိုက်ပါတယ်။
ကာကွယ်ဆေးထိုးပြီးသူတွေအပါအ၀င် အားလုံးကိုသွားလာမှုကန့်သတ်အမိန့် Lockdown ပြန်လည်သတ်မှတ်ဖို့နဲ့ အခြားလိုအပ်တာတွေဆောင်ရွက်ဖို့ ကျန်းမာရေးတာဝန်ရှိသူတွေက ပြောဆိုထားပါတယ်။
တကြော့ပွနျ ကိုဗဈကူးစကျမှုတှကွေောငျ့ ဥရောပနိုငျငံတခြို့ ကနျ့သတျခကျြတှထေုတျပွနျ
သွစတွီးယားနိုငျငံမှာ ကိုဗဈကူးဆကျမှုနှုနျးပွနျလညျမွငျ့တကျလာနတေဲ့အတှကျ တနင်ျလာနေ့ ကစတငျပွီး တနိုငျငံလုံးကို Lockdown သှားလာမှု့ကနျ့သတျတဲ့အမိနျ့ကိုပွနျလညျခမြှတျမှာဖွဈ ကွောငျး သောကွာနကေ့ ဝနျကွီးခြုပျ Alexander Schallenberg ကပွောကွားလိုကျ ပါတယျ။
သှားလာမှခြုပျခယျြကနျ့သတျတဲ့အမိနျ့ကို ၁၀ ရကျကနေ ရကျ၂၀ လောကျအထိပွဌာနျးနိုငျပွီး ဒီအမိနျ့ဟာ ဒီဇငျဘာလ ၁၃ ရကျနအေ့ထိအကွုံးဝငျပါတယျ။
ဒါ့အပွငျ ဖဖေျေါဝါရီလ ၁ ရကျနနေ့ောကျဆုံးထားပွီး တနိုငျငံလုံးကာကှယျဆေးမထိုးမနရေ အမိနျ့ကိုလညျးကွညောခဲ့ပါတယျ။ သွစတွီးယားနိုငျငံမှာ တိုငျးပွညျလူဦးရရေဲ့ ၆၄ . ၁ ရာခိုငျနှုနျး ကာကှယျဆေးထိုးပွီးသားဖွဈပါတယျ။ သွစတွီးယားဟာ ပထမဆုံး lockdown ပွနျခတြဲ့ ဥရောပနိုငျငံဖွဈပါတယျ။
တခြိနျတညျးမှာဘဲ ဂြာမဏီနိုငျငံမှာလညျး ကိုဗဈကူးစကျမှုတှဟော ပွနျလညျဆိုးရှားလာပွီး အမြိုးသားအရေးအပျေါ အခွအေနဆေငျ့ကိုရောကျရှိနတေဲ့အတှကျ ပွနျလညျလြော့ကသြှား အောငျအရေးပျေါဆောငျရှကျမှုတှလေုပျဖို့ ဂြာမနျကနျြးမာရေးဌာနအကွီးအကဲတှကေ သောကွာနမှေ့ာ ပွောကွားလိုကျပါတယျ။
ကာကှယျဆေးထိုးပွီးသူတှအေပါအဝငျ အားလုံးကိုသှားလာမှုကနျ့သတျအမိနျ့ Lockdown ပွနျလညျသတျမှတျဖို့နဲ့ အခွားလိုအပျတာတှဆေောငျရှကျဖို့ ကနျြးမာရေးတာဝနျရှိသူတှကေ ပွောဆိုထားပါတယျ။